Medical Writings for Over 18: HIV FAQ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းများ
• ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ ကျား-မ ပြောပါ။ ရောဂါလက္ခဏာ ၁-၂-၃။ တခုတိုင်းက ဘယ်လောက် ကြာပြီ။ • လိုအပ်ရင် ကျန်းမာရေးရာဇဝင်၊ ဓါတ်မှန်၊ (အာလ်ထွာဆောင်း)၊ ဆေးစစ်ချက်၊ လိုအပ်ရင် အိမ်ထောင်၊ ကလေး၊ ရှိ-မရှိ။ နေတဲ့တိုင်းပြည်၊ မြို့ထည့်ရေးပါ။ လူနာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ အတိအကျ ကိစ္စမရှိပါ။
• ဆေးနာမည်ရေးရင် Trade name ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့နာမည် သာမက Generic name ဆေးနာမည် ထည့်ရေးပါ။
• အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေကို Facebook ကနေ မမေးပါနဲ့ မဖြေပါ။ တိုက်ရိုက်သာ မေးပါ။
• အီးမေးလ် အခက်အခဲရှိလို့ Facebook Comment မှာဖြစ်ဖြစ် Chat box မှာဖြစ်ဖြစ်ရေးရင်လဲ အားသလား၊ မေးလို့ရလား ရေးမနေဘဲ၊ တခါတည်း မေးခွန်းသာရေးလိုက်ပါ။
• SMS အရေးအသားမျိုးကို မဖတ်ပါ။ မြန်မာစကားကို အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ရေးတာကို မဖတ်ပါ။ • ဘလော့ခ် နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ အမေး-အဖြေတွေကိုသုံးတဲ့အခါ မေးတဲ့သူရဲ့ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်တွေ မပါစေရပါ။
• ဖုန်းဆက်ပြီးမေးရင် Time zone မတူတာရော၊ အသံထွက် လွဲနိုင်တာရောကြောင့် အဆင်မပြေပါ။ drswe01@gmail.com ကို (အီးမေးလ်) ပို့ပါ။
• (ဘလော့ခ်) တွေထဲ ဝင်ဖတ်ဘို့ အကြံပြုပါတယ်။
Tue, Mar 6, 2012 at 2:53 PM နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာပါ။ ကျွန်တော် ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်ဆံမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါတယ်။ (ကွန်ဒွမ်) ကို ခနချွတ်ပြီးတော့ ပြန်စွပ်တယ်။ HIV ကူးနိုင်လားခင်ဗျ။
Wed, Aug 28, 2013 at 9:32 AM
ကျွန်တော် အပျော်အပါးလိုက်စားမိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် ယုံကြည်မှု မရှိတော့ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ အပျော်အပါးလိုက်စားပြီး ဘယ်လောက်အကြာအမှာ HIV ရောဂါလက္ခဏာ စပြီးပြတက်ပါသလဲ။ ဘယ်လို လက္ခဏာတွေရော ပြတက်ပါသလဲ။ အခုတော့ တုတ်ကွေးလား ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်မဖြစ်ခင် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် အရင်ဖြစ်တာပါ။ သူ့ဆီကများ အဖျားကူးလားဆိုတာ သံသယ ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ တုတ်ကွေး ဖြစ်ရင်ရော ၀မ်းပျက်တက်ပါသလားခင်ဗျာ။ ဒီနေ့ပဲ ဝမ်းသွားပါတယ်။ ယားယံတာတွေဘာတွေတော့ မရှိပါဘူး။ ကွန်ဒွမ်တော့ သုံးပါတယ်။ အပျော်အပါးလိုက်စားပြီးကတည်းက ဒီနေ့နဲ့ဆို ၂ လ လောက်တော့ရှိပါပြီ။ ဆေးစစ်ချင်ရင် ဘယ်တွေမှာ ဘယ်လိုစစ်ရမလဲခင်ဗျာ။ ဆေးစစ်ရန် လိပ်စာလေးနဲ့ အကြံညာဏ်လဲ ပေးပါအုန်းခင်ဗျာ။
သိပ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ တုပ်ကွေးက သူ့သပ်သပ်လဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုးဝင်ကာစလဲ ဖြစ်တယ်။ သံသယရှိတဲ့ အပြုအမူ-အနေအထိုင် နောက် ၃ လကြာရင် ဆေးစစ်လို့ရပါပြီ။ ကွန်ဒွမ်က အများဆုံးအကာအကွယ်ပေးပါတယ်။ အခုလို ကျန်းမာရေးအသိရှိတာ ကောင်းတယ်။
• အစောဆုံး ဘယ်တော့ သွေးစစ်ရမလဲ
HIV ပိုးရှိသူနဲ့ ဆက်စပ်မှု တနည်းနည်းရှိလို့ ကိုယ့်ကို ကူးသလား အစောဆုံးသိနိုင်အောင် သွေးစစ်ဘို့ အဲဒီအချိန်ကနေ နောက် ၆ ပါတ်ကနေ ၃ လ စောင့်ရမယ်။ ၃ လစောင့်ရင် မှားပြီးအနုတ်ပြတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ၆ လ ထက်တော့ စောင့်စရာ မလိုပါ။ HIV Antibodies (အင်တီဘော်ဒီ) ခုခံပေးမဲ့ဓါတ်တွေ စမ်းလို့ရတဲ့အတိ များလာအောင် စောင့်ရတာဖြစ်တယ်။ Window period လို့ခေါ်ကြတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ နောက်ထပ် ကူးစက်လာမှာမျိုးကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ HIV PCR test က ပိုးဝင်အပြီး ၃ ပါတ်အတွင်းမှာ သိနိုင်တယ်။
• HIV antibody test ဆိုတာဘာလဲ
အများဆုံးလုပ်တဲ့နည်း ဖြစ်တယ်။ သွေးထုတ်စစ်နည်းနဲ့ ပါးစပ်ကသွားရည်ယူစစ်နည်းတွေရှိတယ်။ ပိုးဝင်ထားလို့ ကိုယ်ခန္ဓာကနေ ခုခံပေးမဲ့ ဓါတ်တွေရှိနေတာကို စမ်းတာဖြစ်တယ်။ ချွင်းချက်ရှိတာက HIV အပေါင်းပြနေတဲ့ မိခင်ကနေ မွေးလာတဲ့ကလေးမှာလဲ ဒီ Antibodies (အင်တီဘော်ဒီ) တွေ လအတော်ကြာထိ ရှိနေမယ်။ • Rapid HIV test အမြန်နည်းဆိုတာ Antibody test ခုခံပေးမဲ့ဓါတ် ရှိ-မရှိစစ်နည်းဖြစ်တယ်။ မိနစ် ၃ဝ သာကြာတယ်။ • p24 antigen test ဆိုတာ Antigens ကို စမ်းရတာဖြစ်တယ်။ ရောဂါပိုးနဲ့ဆင်တူတဲ့ ဒီဓါတ်ကနေ ကိုယ်ထဲဝင်ရင် Antibodies (အင်တီဘော်ဒီ) တွေကို ထွက်လာစေနိုင်တယ်။ နေရာတိုင်းမှာ မသုံးပါ။ P-24 Antigen test နဲ့ Antibody test နှစ်မျိုးလုံးတွဲပြီး ၃ လအတွင်းမှာ လုပ်ကြတာလဲရှိတယ်။
• NAT, DNA, RNA and PCR tests ဆိုတာတွေက HIV ပိုးရဲ့ Genetic material မျိုးဗီဇကိုစမ်းတာဖြစ်တယ်။ စောစောကနည်းတွေလို Antibodies နဲ့ Antigens ကိုစမ်းတာ မဟုတ်ဘူး။ Polymerase Chain Reaction (PCR) tests လို့ခေါ်တယ်။ HIV ပိုးရဲ့ မျိုးဗီဇကို ထုတ်ယူ-ပွါးစေပြီးတော့ စမ်းတယ်။ Nucleic-acid Amplification Testing or NAT ခေါ်တယ်။ ဒါမှာ ပုံစံ ၂ မျိုးရှိတယ်။ DNA PCR tests နဲ့ RNA PCR tests တွေဖြစ်တယ်။ RNA PCR tests နည်းကို သွေးလှူမဲ့သူတွေကို စမ်းတယ်။ DNA PCR tests နည်းကို ပိုးရှိတဲ့ မိခင်ကနေမွေးလာတဲ့ကလေးကို စမ်းတယ်။ ၂ မျိုးလုံးကနေ ပိုးတွေ ဘယ်လောက်များများရှိနေသလဲ သိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် Viral load tests လို့ခေါ်တယ်။ NAT နည်းက မြန်တယ်။ RNA PCR test နဲ့ DNA PCR test က ၂-၃ ပါတ် စောင့်ရတယ်။ Instant tests ဆိုပြီး (အင်တာနက်) ကနေ ကြော်ညာတာတွေက အသိအမှတ်ပြု မထားတာတွေဖြစ်တယ်။ • HIV negative အနုတ်ပြနေခြင်း
အနုတ်ပြတိုင်းလဲ လုံးဝကင်းတယ်လို့ ပြောမရသေးပြန်ပါ။ ကိုယ့်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်အဖေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် ပိုးမရှိနေတာတော့ ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ HIV ပိုးက လိင်ဆက်ဆံမှုတိုင်းကနေ ကူးချင်မှ ကူးပါမယ်။ • False positive မှားတဲ့ အပေါင်းပြခြင်း
Flu vaccinations တုပ်ကွေး-ကာကွယ်ဆေးထိုးတာနဲ့ Multiple pregnancies အမွှာကိုယ်ဝန်ကြောင့်လဲ မှားတဲ့အပေါင်း ပြနိုင်တယ်။ Western blot နည်းနဲ့ သေခြာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒီနည်းက စမ်းသပ်မှု ၂ သိန်းခွဲလုပ်မှ တယောက်သာ မှားတဲ့အပေါင်းပြနိုင်တယ်။
• Pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်း စစ်သင့်တယ်။ မိခင်လောင်းမှာ အပေါင်းပြနေရင် ကလေးကိုကူးဘို့များတယ်။ မွေးတုံးမှာဖြစ်ဖြစ် နို့တိုက်နေရင်းဖြစ်ဖြစ် ကူးနိုင်တယ်။ ကလေးကိုမကူးစေချင်ရင် လုပ်နိုင်တာတွေရှိတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံးမှာ Antiretroviral drugs ဆေးသောက်ပါ။ မွေးနေတုံးမှာ Antiretroviral drugs ဆေးသောက်ပါ။ LSCS ဗိုက်ခွဲမွေးပါ။ မွေးပြီးပြီးချင်း ကလေးကို Antiretroviral drugs ရက်တိုဆေးကုပါ။ နို့မတိုက်ပါနဲ့။
• Newborn baby မွေးကာစကလေးကို Antibodies စမ်းရင် ပေါင်းပြမယ်။ ကြားထဲမှာ ကလေးကို ပိုးမကူးစက်ရင်တော့ ၁၈ လနေရင် HIV antibody test က အနုတ်ပြနေမယ်။ ၃ လအရွယ်ကလေးကို ပိုးကူး-မကူးသိအောင် DNA PCR test လုပ်နိုင်တယ်။ HIV ပိုးက အသက်မပြင်းပါ။ အပူချိန်၊ အောက်စီဂျင်တွေကို နဲနဲပြောင်းလဲတာကို မခံနိုင်ဘူး။ အသေအခြာ ပြုပြင် စီမံထားတဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာ မိနစ် အနည်းငယ်သာရှင်နိုင်တယ်။ ၂-၃ မိနစ်လောက်သာ ဖြစ်တယ်။ ဆေးထိုးအပ်ထဲမှာတော့ ရက်အနည်းငယ်အထိ ရှင်တာတွေ့ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆေးထိုးအပ်ထဲမှာ သွေး ကျန်တောက ပိုးအတွက် အသက်ဆက်ရှင်စေနိုင်လို့ဖြစ်တယ်။
၂၅ နှစ်တာ လေ့လာမှုအရ အခုထိတော့ ကိုယ်ချင်းထိတွေရယုံ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ပစ္စည်းနဲ့ ထိတွေ့မှုတွေက HIV ကူးရတယ် ဆိုတာ မရှိသေးပါ။ HIV ပိုးရှိနေခဲ့သူ ကွယ်လွန်သွားရင် ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာမှာ HIV တခုထဲ ကိုသာမက ကြည့်ရမှာတွေထဲမှာ အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကူးစက်နေခဲ့တဲ့ ရောဂါဘယတွေကိုလဲ သတိထားရမယ်။ သေဆုံးနေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတာ ဒီလောက်အရေးမကြီးပါ။ လက်အိပ်သုံးပြီးသာ ကိုင်တွယ်ပါ။ ရင်ခွဲရုံမှာ ခွဲစိတ်စစ်ဆေးရရင် မျက်စိအကာအကွယ်လဲလိုတယ်။ သေခြာတာက တခြားရောဂါပိုးတွေက HIV ထက်ပိုပြီး ရှင်နေနိုင်ကြတယ်။ ဥပမာ TB ပိုး။
အခြေခံဥပဒေသ မှတ်ရမှာက HIV ပိုးရှင်နေရေးမှာ သွေးရှိနေဘို့လိုပါတယ်။ သွေးခြောက်သွားရင် ပိုးလဲ အသက် ပျောက်သွားမယ်။ သွေးသာမက နေရာမှာ ရေဓါတ်ခြောက်သွေ့ရင်လဲ ပိုး အသက်ဆက်ရှင်ဘို့ခက်တယ်။ အခွင့်အလမ်းက နည်းနည်းလေးပေမဲ့ သတိထားသင့်တယ်။ HIV ပိုးဟာ သက်မဲ့အရာတွေမှာ ရှင်နေဘို့ မဖြစ်သလောက် ခက်ခဲတယ်။ စိုနေတဲ့နေရာတွေမှာ ကူးစက်နိုင်တယ်လို့သာ မှတ်ပါ။
ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေက နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ လာတယ်။ အမျိုးသမီး အမျိုးမျိုးကို သက်ရောက်စေတာကလဲ အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တား စားဆေးတွေထဲမှာ...
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၅) ပါးစပ်ကို လိင်ဆက်ဆံရာမှာ အသုံးပြုတဲ့အကြောင်းလေး ရေးပါမယ်။ မေးသူလဲရှိ၊ ရေးဘို့လဲလိုတယ် ထင်လို့ပါ။ (အိုရယ်လ်-ဆက...
Advice for Water festival သင်္ကြန်တွင်းကြ ယူကြုံးမရ မဖြစ်ရအောင်
သင်္ကြန်တွင်းမှာ ပျော်စရာကိုသာရှာသူတွေ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေရတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကို သူမသိပေမဲ့ တကယ်ရှိပါတယ်။ ခေတ်ပြောင်းလာလို့ ဝတ်စားဆင်ယင်တာတွေ ခေတ်ဆန်းလာ...
Penis enlargement (1) ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း (၁) General ယေဘုယျ
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၃၅) October 22, 2009 9:35 PM ယောက်ျား တစ်ယောက် လိင်တံဟာ လိင် ဆက်ဆံဖို့အတွက် ဘယ်လောက် ရှိသင့်လဲ။ ပြည်ပြည်စုံစုံေ...
(၁) တစ်နေ့မှာ အစ်မရဲ့ယောက်ျားဟာ ကျွန်တော့်ကို တိုင်ပင်ပါတယ်။ အစ်မနဲ့ အတူမနေတာ တစ်နှစ် ကျော်သွားပြီတဲ့။ အစ်မ ကိုယ်ဝန်ရကတည်းက အတူမနေက အခုထက်...
ဆရာရှင့် သမီး ကိုယ်ဝန်က ၅ လနီးပါးရှိနေပြီလို့ ကိုယ်ဝန်သွားအပ်တော့ Doctor ပြောပါတယ်၊ ကလေး နှလုံးခုန်သံပါ ကြားရပါတယ်တဲ့ဆရာ။ သမီးသိချင်တာ ကိုယ...
Urinary Tract Infection Medication ဆီးလမ်းကြောင်းပ...
Centchroman ဟော်မုန်းမပါတဲ့ ကိုယ်ဝန်တားဆေး
HIV/AIDS တိုက်ဖျက်ရေး မြန်မာနိုင်ငံ သတိနဲ့ အကောင်း...
Pregnancy how early can be detected ကိုယ်ဝန်ကို ဘယ...
ကျန်းမာစေသော apk file လေးနှစ်ခု
Beauty Questions လှချင်ရက် စက်စက်ယို
Pregnancy and Fetal development သန္ဓေသားကြီးထွားခြင...
Menstruation Questions (2) ရာသီအကြောင်း (၂)
Cervical cancer test DIY သားအိမ်ဝ-ကင်ဆာ ကိုယ့်ဖါသာ...
Pregnancy H mole စပျစ်သီး-ကိုယ်ဝန်
Menopause (1) သွေးမဆုံးခင် ဖြစ်ချင်တာတွေ (၁)
STDs Medicines လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သည့် ရောဂါဆေးများ...
Abortion မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်
Fertility and Hyperthyroidism လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်...
Q and A 15-8-2013
Pregnancy Advice (အွန်လိုင်း) သားဖွါး အကြံပေးခြင်း...
Pregnancy and weight ကိုယ်ဝန်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တို...
Ecee2 Culture စေတနာတွေ ဖြိုးဝေစွာတကယ်
White discharge Question အဖြူဆင်းခြင်းနဲ့ ကလေးထပ်ရ...
DNA testing မျိုးဗီဇစမ်းခြင်း
Depo Provera သုံးလခံထိုးဆေး အတွေ့အကြုံဖေါက်သယ်ချခြ...
Sebaceous hyperplasia အရေပြား အဆီများခြင်း
Oral Practice and STDs ဆက်ဆံရာမှာ ပါးစပ်ကိုသုံးရင်...
Acne ဝက်ခြံ ရောင်စုံ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2010/10/acne.html Acquired Specialist စပါယ်ရှယ်လစ်တမျိုး http://my-sayawun-life.blogspot.in/2014/01/acquired-specialist.html
Menstruation Questions (3) ရာသီအကြောင်း (၃) http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2013/08/menstruation-questions-3.html
Nazi Medical Experiments အော့နှလုံးနာစရာ နာဇီ ဆေးပညာ စမ်းသပ်မှုကြီး http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2014/03/nazi-medical-experiments.html
ချင်းတွင်းမြစ်ကူး ညောင်ပင်ကြီးကူတို http://my-sayawun-life.blogspot.in/2014/01/blog-post.html